Ukuhlolwa koMgangatho waseTshayina kwiKrisimesi minyaka le.Umenzi kunye noMboneleli |Sincoheren
Ukuhlolwa komgangatho kwiKrisimesi rhoqo ngonyaka.
Kwiveki yokuqala kaDisemba, ukuze wamkele ukufika kweKrisimesi, umzi-mveliso waseSincoheren Beijing uqalise uhlengahlengiso lwemveliso kunye nokuhlolwa komgangatho kanye ngonyaka.Kukho ngoku ngaphezulu kwama-50 amagcisa anezakhono kumzi-mveliso waseBeijing, kwaye umsebenzi ngamnye ulandela iimveliso eziziVelisileyo azivavanye kwakhona, azivavanye kwaye alungelelanise imathiriyeli yemveliso.
Umgangatho ubusoloko ungumphefumlo wezixhobo zobuhle, ngoko ke ukuhlolwa kwayo yonke into kunye novavanyo olungqongqo lwenkqubo yonke yokuvelisa ihambelana nomgangatho womatshini wokugqibela.Bonke oomatshini bethu baya kujongwa ngokungqongqo umgangatho ngaphambi kokuthunyelwa.Kuphela ukuqinisekisa ukuba akukho ngxaki, ke iya kuthunyelwa kubathengi bethu.
Umzi-mveliso unenkqubo engqongqo yolawulo lomgangatho, kuba iimveliso zethu zizixhobo zobuhle ezichanekileyo.Kwi-laser kunye nezinye izixhobo, abasebenzi kufuneka banxibe iimpahla ezingqongqo kunye neeglasi ze-laser.Ukudityaniswa kwesixhobo ngasinye kunye nesikrufu ngasinye, kuya kubakho okukhethekileyo Kwabasebenzi abaqhuba uhlolo ukuqinisekisa ukuba inyathelo ngalinye alinakuhamba kakubi.
Umlawuli wefektri uya kuthatha uluhlu lwazo zonke iimveliso, yeyiphi imveliso enomthamo ophezulu wokuthengisa, yeyiphi imveliso enezinga eliphezulu lokungaphumeleli, ezifuna ukuphuculwa, njl., ukwenzela ukuba iimveliso zethu zihlangabezane ngcono nemarike.
Umzi-mveliso ngoku unomgca wemveliso opheleleyo, kwaye umgca ngamnye uhamba ngesantya esiphezulu yonke imihla.Ngoku iimveliso zethu ziquka i-diode laser, i-SHR IPL, i-Q Switched Nd yag laser, i-CO2 laser, i-Cavitation RF, i-Kumashape, i-Coolplas Cryolipolysis, i-Hydrafacial, i-Emsculpt, i-HIFU, i-Oxygen, i-Pressotherapy, i-Plasma pen, njl. Phakathi koko, i-diode laser, i-SHR IPL, i-CO2 laser kunye ne-Q Itshintshile i-Nd yag laser evunywe yi-FDA kunye ne-TUV Medical CE, enye imveliso nayo yonke ine-CE.
Umgangatho uza kuqala.Abathengi bethu bavela kwihlabathi liphela.Siyathemba ukuba iimveliso esizivelisayo zinokuhanjiswa kuye wonke umthengi.Sikwanethemba lokuba iimveliso zethu zinokuzisa ishishini elihle kubathengi bethu.
Ixesha lokuposa: Nov-23-2020